Maaltu deemaa ture? Maaltu deemaa jira? Maaltu deemuuf jira? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMaaltu deemaa ture? Maaltu deemaa jira? Maaltu deemuuf jira?
“Qeerrroo hammareessa guyyaa Har.a kora bitinesa oromia wajjin dinne gabrummaa ja’an adero kiyya post naf godhi..haalan namati tola”
” Basaastota wayyaane raayya ittisa keessa boobbafamun jeequmsarrati bobbaa’an kanneen garba gurraachati konkoolataa gubaa oolan sana to’annaa poolisi jala oolun isaani ni yaadatama ture. qajeelchan p /aaniicha jara sana gubboodhaan gadhaise nama qulqullu jiiraata magalicha kan ta.e obbo atoomaa damee kan jedhamu konkolataa gubateef situ itti gaafatama jechun hanga har’aatti dararati jiru mana hidha ana kuyyuti kana qilleensara nuf olchi ”
Lammaa Magarsaa kan Civil Service College irraa bara 1998 eebbifame, waggaa 18 booda har’a qabsoo Oromoo karaa irraa maqsuuf halkanii guyyaa hojjataa jira.
Oromoon har’aa ajjeefamaa, hidhamaa fi buqqifamaa jira.
Biyya keessatti mirga hinxuqamne argatanii akka argan TPLF abaaruun waan qabsoo uummataa galmaan gahuuf deeman of fakkeessanii abaaraa turan. Isaanumti kun erga uummatni isaan faana luuccaa’eemmoo muudama argatanii gara aangoo olaanaatti guddatani. Wayyaanee fi humna waraanaa Wayyaanee akka argan abaaruuf mirga argatani. Kanaanis uummanni gootota jajjaboo arganne jechuunii eegale.
Dubbiin namoota dirqama dabballummaa Wayyaanee fudhatanii Wayyaanee abaaruu irratti fuulleffatanii uummata hundatti bitaa gale. Uummanni akka dhaabbatee dhaggeeffatu taasise. Dhaggeeffachuurra darbee arraba isaan biyya keessatti ta’anii Wayyaanee arrabsan qofaaf “Goota keenya” jechuunis jalqabe.
Biqiltuuwwaan ABO irraa lataa turan kutanii goksuu, ABO s qottoo jechootaan muranii gatuuf abbaluu jalqaban. Isaanumti Wayyaanee ajajoota Waraanaa TPLF Jeneraalota Tigiree arrabsaa turan libsuu ijaa gidduutti galagalanii ABO hadheessuuf fuula miidiyaa kana yaabbatan. Akkuma kanaanis “ABO wanti jedhamu badeera” jechuu qaban.
Ilmaan alaatti ergatan kanneen qabsaa’ota Oromoo dadhabsiisuuf akkaasuma akka uummanni Alaa ABO hindeggarreef dirqamoota gurguddaa fudhatanii baahan sana faana quba walqabaa turan sana waliin ta’uun dibbee baduu ABO rukutuun cookanii sirbuu jalqaban. Uummanni kan icciitii dubbii kanaa hubachuun lafarra harkifateef abdii hanga muruuf gahutti ga’e.
Icciitiin namoota uffata foolisii gadii kutaa itti aanu keessatti ibsuun yaala. Shira shiramaa jiru shireessanii shiraan shira xaxuun nu xaxuuf adeeman
Via: Beekan G Erena
Guyyaa booru Amboo (Sanqaleetti) MNO Milishoota 5,000 ol leenjisaa ture ni eebbisissa.
Gocha seeraan alummaa fi olaantummaa seeraa cabsuu Nageenyaa fi sochii hawaasaa haala yaaddessaa keessa galchuu naannoo Oromiyaa keessatti darbee darbee mul’atu hambisuuf Caasaa nageenya aantummaa uummataa fi ummata tajaajiluuf kutannoo qabu ijaaruun murteessaa waan ta’ee Milishoota leenjisaa ture jira.
Kanumaa waliin wal qabatee Nageenya naannoo keenyaa amansiisaa taasiisuu fi naannoo keenya keessatti ol’aantummaa heera mootummaa karaa guutuu tahen mirkanneessuun akka danda’amuuf Milishoonni Kuma Shanii (5,000) ol tahan ji’oota darbaniif leenji’aa turan guyyaa booru ni eebbifamuu.
Dabalataaniis, guyyaa boorii Komishiniin Poolisii Oromiyaa,Kaadhimamtoota Poolisii haaraa 6000 (Kuma Jaha) tahan leenjii ni eegalsiisa.
Pireezidaantin Mootummaa Federaalawaa Dimokraatawaa Repoobliika Itiyoophiyaa duraani Doktor Nagaasoo Gidaadaa sirna eebba Konkoolaataa Gadaa “Gada Bus” irratti argamuun yaada kennanin:
“Oromoon baratee dinagdee keessatti hirmaate akka fayyadamuuf qabsaa’onni Oromoo kanneen akka Jenaraal Taaddasaa Birruu waldaa Macaa fi Tulamaa jalatti gurmaa’un warreegama qaali kaffalanii jiru, kaayyoon isaani ganamaa karaa qabachuun isaa miira abdii namatti hora”
“Sochiin amma taasifamaa jiru kana yeroon ilaale baayyee nagammachiise, sochii warraaqsa dinagdee kanaas ija gaariidhaanin ilaala”
“Kaayyoo ganama qabamee milkeessuuf garuu cimanii hojjachuu fi waldhaga’uun murteessaa dha”
Yaada sirna eebba Gadaa Bus irratti argamun kennan keessaa kan fudhatame. Horaa Bulaa!!